Ny dikan'ilay anarana dia Victor. Ny misterin'i Victor
Inona no dikan'ilay anarana hoe Victor?
Ireo toetra tena manan-danja amin'ny Victorians dia fitokisana sy fahalalahan-tanana, saingy miandrandra am-pandresena sy fihetseham-po mahery vaika izy ireo.
Amin'ny teny latinina, ny anarana hoe Victor dia midika hoe "mpandresy."
Ny niandohan'ny anarana hoe Victor:
Ny anarana hoe Victor dia avy amin'ny teny latinina hoe "mpandresy", izay midika hoe "mpandresy." Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Victor:
Hatramin'ny fahazazan'i Victor dia nafana fo, kiraro ary natoky. Manafintohina ny lainga izy, saingy tsy mety ny manisy ratsy ny ratsy, manala baraka ary tia namana. Ny fahalianana matanjaka amin'ny Viktoriana dia miteraka ny tsy mahazatra, mampientanentana, mifandray amin'ny aventure sy ny aventure. Ao amin'ny orinasa mpiara-mitory aminy, dia manolotra ny piraty na mpihaza harena foana izy ireo, ary any am-pianarana dia miantsoroka manokana ny zavatra tiany. Sarotra ny mipetraka kely i Victor amin'ny lesona momba ireo lohahevitra izay tsy mahaliana azy.
Na dia eo aza ny nofinofy sy ny nofinofy, ny Viktors dia tena azo ampiharina ary miorina mafy amin'ny tany. Avy amin'ny tetik'asa nofidiny ny iray izay ananany tanjana ary izay tian'izy ireo hahatratra ny fahombiazana lehibe indrindra. Izy ireo dia olona manao fihetsika haingana sy fanehoan-kevitra, matetika dia mitarika azy ireo ho amin'ny fanatanjahantena ny fitetezana ny natiora. Ny mpandresy dia mahalana dia misafidy asa am-pahamendrehana sy miavaka, aleony mankany amin'ny iray izay ahafahanao mahita ny vokatra saika avy hatrany rehefa vita ilay asa. Amin'ny maha-mpampitahiry an'i Victor azy, dia mendri-piderana, manenina ary manenjika. Ny mpitarika azy dia miverimberina, kanefa afaka mahafantatra ny tombotsoan'ny orinasa izy ary mitazona izany, mamantatra ny fahafinaretana am-pirahalahiana avy amin'ny fifanakalozan-kevitra. Sarobidy ny fiarahamonina ary miezaka ny mifidy namana amin'ny fomba mahatsikaiky vazivazy.
Mandefitra, mandefitra ary miandrandra izany amin'ny hafa. Matetika i Malko, Victor dia mety manafintohina, fa matetika ny fahamendrehana ara-boajanahary dia tsy mamela azy hanompa olona. Amin'ny ankapobeny dia tsy tia olona matavy be loatra izy ary miadaladala loatra, tsy misalasala maneso azy ireo, fa tsy mikarakara ny vokany. Ny faniriana ny hampientanentana ny maro amin'i Viktors dia mahatsapa amin'ny hafanam-pony amin'ny fanatanjahantena henjana na filokana. Ny fahadisoana lehibe aterak'izy ireo - teraka tamim-pahalemena sy tsy firaharahiana ny fitondran-tena.
Amin'ny fifandraisana amin'ny sehatra mifanohitra aminy Romanticists sy idealista. Matetika dia misafidy ny modely amin'ny fifandraisana amin'ny boky tianao ary miezaka ny mifanandrify amin'izany. Amin'ny maha-namana, toy ny amin'ny namana, dia mankasitraka ny fisainany izy ireo. Matetika no mahaliana ny vehivavy zokiolona mihoatra noho ny tenany.
Ao am-pandriana Victor dia mamitaka, maneso sy mandanjalanja. Tiako ny fahazoana fahalalana vaovao - na avy amin'ny iray na voafidy izany na avy amin'ny literatiora voakasik'izany. Mankasitraka ny fisokafana. Noho ny fanahy mareva-doko, dia matetika i Victor no mahita olana amin'ny fisafidianana namana iray. Ao amin'ny vehivavy mitady ny fitoviana amin'ny tenany sy ny fandinihana ny toetra sy ny fahatsarany. Mahalana ny mamela ny vadiny, fa afaka mamadika, maneho fitiavana sy tsy tapaka amin'ny fikarohana ny fahatsapana.
Ny fifandraisana tsara indrindra amin'ny Vikings dia miaraka amin'ireo Galiana, Innas, Larissa, Olga ary Svetlana, ary matetika dia miatrika olana ny fanambadiana miaraka amin'i Veronika, Eugenia, Zinaida ary Catherine.
Ny fianakaviana Viktors dia mankasitraka ny firaisana ary mahita izany ho seranana mangina sy fomba iray ahafahana mandositra ny fahatsapana ho irery. Tia ankizy izy ireo, saingy indraindray dia tafahoatra loatra izy ireo, fa sady malala-tanana ihany koa. Matetika ny fampidirana ny filaminana hentitra amin'ny fiainam-pianakaviana, ary ny taona dia mihamitombo ny fametram-pony. Ireo mpanohitra dia maneso amin'ny resaka olana eo amin'ny fianakaviana ary tsy manisy lanjany be azy.
Zavatra mahaliana momba an'i Victor:
Teraka tamin'ny ririnina, ny Victors dia tena mampihetsi-po sy be fitiavana, be fitiavana ary mialona. Ny "fahavaratra" dia fohy, mihidy ary azo itokisana, ary ireo izay teraka tamin'ny fararano na ny lohataona dia tsy dia mahaliana loatra ary manana ny toetoetran'ny mpikaroka.
Anarana Victor amin'ny fiteny samihafa:
Anarana Victor amin'ny teny sinoa: 维克多 (Veikedo)
Anarana amin'ny teny japoney: ヴ ィ ク ト ル (Vicutor)
Victor amin'ny teny Espaniola: Victor (Victor), Victorio (Victorio)
Anarana amin'ny teny alemà Victor: Victor (Victor)
Anarana amin'ny teny poloney: Wiktor (Victor), Wiktoriusz (Victoriush)
Victor amin'ny teny Okrainiana: Victor
Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Vitya, Viora, Viktyaya Vityusya, Vishuta, Vishuta, Vika, Vitoria
Victor - anarana : grey
Victor's Flower : artichoke an'i Jerosalema
Vaton'i Victor : agate
Sodoma sy Gomora dia novonoina vokatry ny voina, izay hamerina ny 2029!
Inona no atao hoe Ellina
Inona no atao hoe Alexander?
Inona no atao hoe Margarita
Masoivohon'i Liechtenstein any Okraina
Ny fitondrana vohoka nohavaozina amin'ny manaraka
Miala amin'ny kisoa
Fanafody amin'ny torticollis amin'ny zaza vao teraka
Inona no horaisina eny an-dalana?
Impulse amin'ny fandoroana tavin-kena
Ny fantsika hodi-jiro - sary 60 ho an'ny fipoahan'ny lohataona amin'ny lohataona
Ahoana no tokony hambolena tongolo lay?
Kalifornia no manasongadina ny volony mainty
Hazo sy ronono an-tanety
Tsiranoka, voankazo ary tantely ho an'ny fatiantoka - fitsaboana
Wall Mural any London